theZOMI: [moemakadaily@moemaka.biz] 14th April 2013 - MoeMaKa Daily
[moemakadaily@moemaka.biz] 14th April 2013 - MoeMaKa Daily
ဇော်အောင် (မုံရွာ)၊ ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၁၃
လူထုဒေါ်အမာရေးတဲ့ ချင်းတွင်းမှပင်လယ်သို့ စာအုပ် ၁၉၈၅ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၂မှာ ထပ်မံထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
မောရစ်ကောလစ် နဲ့ လူထုဒေါ်အမာ တစ်သားထဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မောရစ်ကောလစ်ဟာ မြိတ်မှာ၂နှစ်ခွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး၊ ခွင့်ရက်ရှည် အင်္ဂလန်ပြန်ချိန်မှာ Samuel White စာအုပ်ကို ရေးသားထုတ်ဝေရင်း၊ အောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် ပြန်မလာတော့ပဲ အလုပ်ကထွက်ပါတယ်။ စာရေးဆရာဘ၀ကို ခြေစုံပစ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက် ဒုတိယစာအုပ် Trial wasaQueen, တတိယစာအုပ်ကတော့ မြန်မာပြည်ကို အမှတ်တရ Trials in Burma စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
လူထုဒေါ်အမာ အသက်၂၃နှစ်အရွယ်မှာ ဘာသာပြန်ပြီး လုံးချင်းစာအုပ်ထုတ်ခဲ့တာ၊ တခဏတွင်းမှာ တတိယအကြိမ်အထိ ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 'မြန်မာပြည်တွင် စစ်ဆေးခဲ့သော အမှုအခင်းများ' စာအုပ်ကို တတိယအကြိမ်ထုတ်မှာ "Trial of Burma (Myanmar)" လို့ ထိုစဉ်က စာပေစီစစ်ရေးက Myanmar စာလုံးကို သုံးခိုင်းပါတယ်။ လူထုဒေါ်အမာလည်း ဒုတိယ လုံးချင်းစာအုပ်ဟာ မောရစ်ကောလစ်ရဲ့ စာအုပ် စန္တမာလာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူထုဒေါ်အမာလည်း နိုင်ငံသိ စာရေးဆရာမဘ၀ကို ရောက်သွားပါတယ်။
လူထုဒေါ်အမာရဲ့ ခင်ပွန်း လူထုဦးလှ မြန်မာသတင်းစာဆရာများနဲ့ အင်္ဂလန်သွားတဲ့ ၁၉၅၈ခုနှစ်မှာ ဆရာမကြီးလူထုဒေါ်အမာက နှုတ်ဆက်လက်ဆောင်၊ မြန်မာလုံချည်တစ်ထည်၊ လွယ်အိတ်တစ်လုံးနဲ့ ရှမ်းဒါးမြောင်ကလေးတစ်ချောင်း ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီး မောရစ်ကောလစ်ဟာ လက်ဆောင်များကို ကြည့်ရင်း၊ အခုချိန်ခါမှာ သူ့စာများကို မြန်မာပြည်မှာ ဖတ်ကြသေးသလား... လို့မေးပါတယ်။ ၁၉၃၈ခုနှစ်ကတည်းက မြိတ်မြို့ကို လည်ဖို့အကြံ အနှစ်၄၀ကျော်မှ လူထုဒေါ်အမာ မြိတ်ကိုရောက်ရှိပြီး၊ မောရစ်ကောလစ် နေထိုင်၊လှုပ်ရှားခဲ့ပုံများကို ခြေရာလိုက်ခံ၊ ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်း ... ၁၅မျက်နှာ အမှတ်တရ ရေးခဲ့ပါတယ်။
Trials in Burma စာအုပ်မှာ မြန်မာပြည်အရေးကြီးတဲ့ အမှု၃ခု သူစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အကြောင်း တွေပါတယ်။ တစ်မှုက စတီးလ်ဘရားသားမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ မျက်နှာဖြူတစ်ယောက်က သူ့လက်ကြယ်သီးပျောက်လို့တဲ့။ သူ့အစေခံ မြန်မာလူငယ်တစ်ယောက်ကို သူ့အခန်းထဲခေါ်ပြီး စစ်မေးတယ်။ ဒီအစေခံက သူမယူပါဘူး ငြင်းတယ်။ နောက်တော့ အစေခံက စစ်နေတဲ့ အခန်းပြတင်းပေါက်ကနေ အောက်ကိုထိုးကျပြီး သေသွားတယ်။ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာက ရန်ကုန်မြို့ အလံပြဘုရားလမ်းက၊ စတီးလ်ချန်မာရီ ခေါ်တဲ့ စတီးဘရားသား အမှုထမ်း မျက်နှာဖြူတွေ နေတဲ့ လူပျိုဆောင်၊ သုံးထပ်တိုက်ကြီး၊ ဒီအမှုက မြန်မာနဲ့အင်္ဂလိပ် လူမျိုးရေးဖက်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှု။
နောက်တစ်ခုကတော့ ခွဲရေး၊တွဲရေး ခေတ်ကာလမှာ ကလကတ္တားမြို့တော်ဝန်၊ ဆင်ဂုပတား ရန်ကုန်လာပြီး ဟောပြောပွဲတစ်ခု ကြုံလို့ လုပ်သွားတယ်။ အဲဒီ ဟောပြောမှုမှာ ဗြိတိသျှအစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်စေတဲ့ ဟောပြောချက်တွေ ပါတယ်ဆိုပြီး၊ ဗြိတိသျှအစိုးရက ဆင်ဂုပတားကို အရေးယူတယ်။ ယူပုံက ကလကတ္တား သွားပြီး၊ မြို့တော်ဝန်ကို ရန်ကုန်ဖမ်းခေါ်လာပြီး အစစ်ခံစေတာပါ။ ဒီအမှုက နိုင်ငံရေးအမှုပါ။
နောက်တစ်မှုကတော့ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ မျက်နှာဖြူစစ်တပ် ကင်မရွန်းတပ်က စစ်ဗိုလ်ကလးတစ်ယောက် ကလပ်မှာ မူးပြီးကားနဲ့မောင်းအပြန်အလာမှာ အခြားကားကို သူကလမ်းမှားပြီး တိုက်လို့ တခြားကားပေါ်က လူတွေ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရတယ်။ စစ်ရေး၊ လူမှုရေး ရောစပ်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုပါ။
ဒီအမှုတွေကို ကိုင်တွယ်ရတော့ မစတာကောလစ်က အင်ပါယာကြီးရှင်နဲ့ ဗြိတိသျှအုပ်စိုးရေး ယန္တယားဟာ တရားဥပဒေနဲ့ အုပ်စိုးတာ၊ ဥပဒေအတိုင်း ဘာမဆိုဖြစ်စေရမယ် ဆိုတာကို ပြသမှ အယူအဆနဲ့ သူက တရားဥပဒေနဲ့အညီ စီရင်ချက်တွေချတယ်။ နို့ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီး အုပ်စိုးချယ်လှယ်နေတဲ့ ဗြိတိသျှ ဗျူရိုကရက်တွေနဲ့ ဗြိတိသျှကုန်သည်ပိုင်း အရင်းရှင်တွေက ဒီစီရင်ချက်မျိုးကို လက်မခံဘူး။ မှားမှားမှန်မှန် ကိုယ့်လူမျိုးဖက်ကို ငဲ့ပြီး စီရင်ရမယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒါကြောင့် ကောလစ်ကို ၀ိုင်းပြီး အမျက်သိုကြတယ်။...
ဆရာမကြီးလူထုဒေါ်အမာ ရေးသားထားချက်အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ချင်းတွင်းမှပင်လယ်သို့ .. စာအုပ်မှာ ဆောင်းပါးများတွင်၊ မုံရွာ၊ လက်ပံတောင်းတောင်၊ ဖိုးဝင်းတောင်၊ ချင်းတွင်းမြစ်ခရီး မုံရွာမှမော်လိုက်ထိ ၁၈၃မိုင် မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် အစုန်၊ဆန်ခရီး အလုံ၊ယိုဒေါင်၊ ကနီ၊ ကင်း၊ သင်းတော၊ မောကတော်၊ မင်းကင်း၊ ချောင်းဝ၊ ကလေးဝ၊ မစိန်၊ မော်လိုက် စသည့်မြစ်ကမ်းမြို့များ၊ ၀ါးဖောင်လုပ်ငန်း၊ ၀ါးနှင့်သင်လုပ်ငန်း၊ သစ်မွှေးလုပ်ငန်း၊ ရေနံလုပ်ငန်းစသည်တို့ကို ရေးသားထားပါတယ်။ သစ်မွှေးအကြောင်း ရေးထားတဲ့အခါမှာ ဈေးကောင်းရတဲ့ မြန်မာ့သစ်မွှေးဆိုတာ ခရစ်တော် သခင်ယေရှုမွေးဖွားချိန် ပညာရှိကြီး ၃ပါးလာရောက်ပူဇော်တဲ့ ရွှေ၊ ငွေ၊ လောဗန်၊ မုရန် ဆိုတဲ့ လက်ဆောင်များက မုရန်ဆိုတာ သစ်မွှေးကိုခေါ်ကြောင်း၊ အာရပ်နိုင်ငံများက အလွန်ဈေးကြီးပေးပြီး ၀ယ်ယူကြောင်း ဗဟုသုတရပါတယ်။
မြန်မာလို အကျော်ဟု ခေါ်ပြီး။ ကျမ်းစာတွင် မုရန်ဟု ခေါ်သည်။ တစ်ကီလိုကို ဒေါ်လာ ၄သောင်းကျော် အာရပ်လူမျိုးများ ၀ယ်ယူသုံးစွဲကြသည်။ စာအုပ် စာမျက်နှာ ၄၀-၄၆ တွင်ရေးထားသည်မှာ ချင်းတွင်းဖြစ် နာမည်ကြီးထွက်ကုန်တခု၊ ၁၉၇၀လောက်က တစ်ပိသာ ကပ်၇၀၀ခန့် ဈေးတက်သွားသည်။ အာရပ်များ ဘာသုံးကြသလဲ လူထုဒေါ်အမာလည်း မသိ၊ အမွှေးအဖြစ် သုံးသည်သာ ကြားရသည်။ မှောင်ခိုသမားများလည် သစ်ပင်ခုတ်လှဲပြီး အလွှာလိုက် လှီးဖြက်ရှာသည်။ ရသူများ ချမ်းသာသွားပြီး၊ မရသူများလည်း ရှိသည်။ သစ်တောသုတေသန အလိုအ၇၊ ပင်စည်ထဲတွင် သစ်စားပိုးတမျိုးဝင်၊ ထိုပိုးအကြွင်းကျန်များ သစ်ပင်တွင်း ကျန်ရစ်ခြင်းဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။ သစ်မွှေးကို လိုချင်သောကြောင့် အကျော်ပင်များကို အရမ်းလှဲခုတ်ကြရာ .. ရသူလဲရ၊ မရသူလဲမရ။ လူထောင်နဲ့ချီပြီး အုပ်စုလိုက် ရှာဖွေပြီး၊ ၀ယ်ခြမ်းသူများကခနီး၊္တ မြစ်ကြီးနား၊ ဟုမ္မလင်း၊ စသည့်မြို့များတွင် စောင့်ဝယ်သည်။ သစ်မွှေးများကို မုံရွာ၊မန္တလေး နည်းမျိုးစုံ သယ်ယူလာပြီး၊ အိန္နိယသို့ ခိုးထုတ်ရောင်းချကြသည်။ မြန်မာသစ်တောများတွင် ၀င်ရောက်ခုတ်ထစ်သောကြောင့် ပဲခူးရိုးမတိုင်ရောက်နေပြီဟု သိရာသည်။
(၁၉၈၀) လူထုဦးလှက ဟံသာဝတီသတင်းစာတွင် ၁၉၇၃ဇွန်၅ရက်က တောပြုန်တီးတော့မည်ကို ရေးခဲ့သော်လည်း မထူးခြားပါ။ ယခုအခါ သစ်မွှေး၊ ကျွန်းသစ်မက သစ်မာ၊သစ်ပျော့ အားလုံးကုန်လေပြီ။ သစ်မွှေးပင်များကို လွန်ခဲ့သော၁၀နှစ်ကျော်မှ မြန်မာနိုင်ငံ အထူးသဖြင့် ကချင်ပြည်တွင် စိုက်ပျိုးနေကြသည်။ သို့သော် သစ်မွှေးပင်ထဲသို့ ပိုးကောင်အကြွင်းကျန်များမှ အမွှေးနံ့သာကျန်ရစ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ မည်ကဲ့သို့ ထိုပိုးကောင်ကို မွေးမည်နည်း။
ပင်လယ်ခရီး ထားဝယ်၊ မြိတ် ခရီးစဉ်တွင်လည်း ထားဝယ်သတ္တုလုပ်ငန်း၊ ဓနိနဲ့ထန်း၊ ပလောပီနံ၊ ပုလဲမွေးမြူခြင်း၊ ရာဘာ၊ ငါးပုဇွန်ဖမ်းခြင်း၊ ငါးမန်းဖမ်းခြင်း၊ ငှက်သိုက်လုပ်ငန်း၊ ထိုစဉ် ၁၉၈၀နောက်ပိုင်း မှောင်ခိုကုန်လုပ်ငန်းများ၊ စသည့် စီးပွားလုပ်ငန်းများကို ရေးသားထားပါတယ်။ ထို့အပြင် နာမည်ကျော် မီးဗုံးပျံဦးကျော်ရင်၊ ကနုကမာစီဆရာကြီး ဦးထူးခိုင်၊ ပန်းချီဆရာကြီးဦးငွေကိုင်၊ တို့အကြောင်း၊ အတူသွားလာခဲ့သော ခင်ပွန်းသည်လူထုဦးလှ၊ ဆရာဦးသုခ နှင့် ဒေသခံမိတ်ဆွေများ၊ စာပေ၊ ဓမ္မမိတ်ဆွေများအကြောင်းများ ဗဟုသုတနှင့်ရသ များစွာရရှိပါတယ်။ အလွန်ထူးချွန်သော စာရေးဆရာမကြီးဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကနှင့်စာပေလောကသားများအထုးရိုသေလေးစားကြသော စာရေးဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာ (၉၃) နှစ်သည် ဒီနေ့ (၇/ဧပြီ/၂၀၀၈)မနက် ၈နာရီ ၃၇မိနစ်၊ မန္တလေးမြို့တွင် လူကြီးရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ သူတို့ဇနီးမောင်နှ၏ နိုင်ငံအကျိုးပြု စာပေများကို မန္တလေးမြို့သူ၊မြို့သားများက ပြတိုက်အဖြစ် ထိန်သိမ်းထားမည်ဟု မျှော်လင့်ပါကြောင်း။
ဇော်အောင် ၁၂ ဧပြီ ၂၀၁၃
၁။ တစ်ချိန်က မြိတ်မြို့ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ၊ မောရစ်ကောလစ် နှင့် ယိုးဒယားဝှိုက်။ စောသက်လင်း
၂။ မြန် မာ့သစ်မွှေးရတနာ ACMV
၃။ ပြင်၍ မှားသော အမှားများ ထိန်လင်း
No comments: Labels:Memories, Zaw Aung (monywa)
ကံထွန်းသစ် ၊ ဧပြီ ၁၃ ၊ ၂၀၁၃
ခုတလော စာမရေးဖြစ်။ အမိမြေက နှလုံးနောက်ကျုဖွယ်အာရုံတွေနှင့် မောလျနေခဲ့သည်။ မျက်စိ၊ နား၊ မနော သုံးပါးသော ဒွါရတံခါးတွေကနေ အလျင်မပြတ်ဝင်လာနေသည့် အာရုံခါးတွေ ... အာရုံခါးတွေ ... ။
မအူပင်ကွင်းဆီက သေနတ်သံတွေ၊ လက်ပံတောင်းတောင်ရိပ်က ငိုယိုရန်တွေ့သံတွေ၊ မိတ္ထီလာက မီးခိုးငွေ့တွေ၊ ဗလီကျမ်းစာသင်ကျောင်းက ကလေးငိုသံတွေ၊ ခုနောက်ဆုံး အင်ဒိုနီးရှား ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းက ဗမာရေလုပ်သားလေးတွေရဲ့သွေးတွေ ... တွေ ... ။
ထိုအကြောင်းအရာတို့သည် မိုးလင်းမိုးချုပ် ခေါင်း၌ နေရာယူကြသည်။ ရင်၌တပ်စွဲကြသည်။ သည်တော့ စာပေရေးသားမှုကိုမဆိုထားနှင့်။ ပြုနေကျ နိစ္စဗဒ်တို့ပင် လစ်ဟင်းချင်ချင်၊ မေတ္တာ ကမ္မဋ္ဌာန်းပင် အနိုင်နိုင်။
တဖြည်းဖြည်း တည်ငြိမ်စပြုသည့်တိုင် အကင်းမသေချင်။ ရင်၌ပုစ္ဆာတို့ ကြွင်းခဲ့တော့သည်။ ထိုပုစ္ဆာတို့ကို အဖြေရှာနေမိသည်။ ကိုယ့်ထက် သုတကုံလုံသော၊ ပညာကြွယ်ဝသော စာဖတ်ပရိသတ် ကြီးကိုလည်း ဖြေဖေါ်ညှိကြည့်ချင်သည်။
တနေ့ ဖုန်းထဲကနေပြီး "ဘုန်းဘုန်းရေ ... တပည့်တော် "၉၆၉" ကဒ်လေးတွေမှာတာ၊ လူကြုံက ယူလာဖို့ ဝန်လေးနေတယ်၊ သူတပါးဘာသာကို ရန်စသလိုဖြစ်မှာစိုးလို့တဲ့၊ အဲဒါ တပည့်တော်မ သဘော မတူဘူး၊ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ၊ ကိုယ်ကိုးကွယ်ရာကို ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ "သင်္ကေတ" နဲ့ ကိုးကွယ်ခွင့် ရှိတယ် မဟုတ်လား"
အော်ရီဂွန်၊ ပို့တလန်မြို့က နှမငယ်တစ်ယောက်။ ဟုတ်သည်၊ သင်္ကေတတွေ ဘာသာအသီးသီး မှာ ရှိကြတာပဲ။ ဟိန္ဒူမှာဆို " ॐ "၊ ခရစ်ယာန်တွေမှာ "လက်ဝါးကပ်တိုင်"၊ အစ္စလမ်တို့မှာ "၇၈၆"၊ ကိုယ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ အိန္ဒိယမှာ လှည်းဘီးဓမ္မစက်ဝန်း၊ မြန်မာမှာတော့ "အ" နှင့် "ရ" ကို "ဟ" အတွင်း ထည့်ရေးသည့် "အရဟံ" ဆိုသည့် သင်္ကေတမျိုးလေးတွေ ရှေးအဆောက်အဦတချို့၏ နဖူးစည်းမှာ တွေ့တတ်ရဲ့။ အခုတိမ်ကောခဲ့ပြီ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ဘာသာတရားကို နက်နဲစွာကိုးကွယ်သူ၊ ဒါမှမဟုတ် ဈေးကွက်မြင်သူတဦးဦးက သည် "၉၆၉" ဆိုသည့် လိုဂို (Logo) လေးကို တီထွင်လိုက်ပေမည်။ ဘုရားဂုဏ်တော် ကိုးပါး၊ တရားဂုဏ်တော် ခြောက်ပါး၊ သံဃာဂုဏ်တော် ကိုးပါးတို့ကိုရည်ရွယ်ကာ ဒီဇိုင်းဆင်ခဲ့ခြင်းပင်။ ထိုဂဏန်းလေး သုံးလုံးကိုကြည့်၍ ဘာသာဝင်တိုင်း ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ကြမည် ဧကန်။ "ယောနိသောမနသီကာရ" ရှိကြလျှင်ပေါ့။ ယောနိသောမနသီကာရ မဲ့သူများအတွက်မူ အဆိုးမြင်ကောင်းမြင်ကြပေလိမ့်မည်။ သို့နှယ် တနံတလျား စဉ်းစားနေစဉ် ...
"ဘုန်းဘုန်း ... ယဉ်ကျေးသူမှန်ရင် သူများဘာသာကို ထိပါးခွင့်မရှိသလို ကိုယ့်ဘာသာကိုလည်း စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ခွင့် ရှိတယ်မဟုတ်လား ..."
ကိုယ်မဖြေနိုင်မီ၊ ကိုယ့်အတွက် ပုစ္ဆာတပုဒ်ထားခဲ့ကာ ကိုယ့်နှမ ဖုန်းချသွားခဲ့ပြီ။
"ခုတလော ဒီကမောင်တွေ လူ့အခွင့်အရေးစကားတွေ သိပ်ပြောနေကြတယ်။ မြန်မာပြည်မှာက တခြားအခွင့်အရေးတွေ နည်းခဲ့ပေမယ့် လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်၊ ရှိခိုးခွင့်တွေ တန်းတူရနေကြတာ မဟုတ်လား၊ ဘယ်ဘာသာကမှ ပိုကိုးကွယ်ခွင့် မရှိပါဘူး၊ ကိုယ့်ဘုရား ကိုယ်ကြိုက်သလို ကိုးကွယ်ခွင့် ရှိကြတာပဲ၊ တကယ်ဆို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတောင် နှိပ်ကွက်ခံရတာများသေး၊ ရွှေဝါရောင်အရေး အခင်းမျိုးကိုကြည့်လေ၊ ဒါကို အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်ခံရတယ်ဆိုတော့ ကြားပြင်းကပ်တယ်၊ တဘက်ကို အခွင့်အရေးမရှိသယောင် ပုံကြီးချဲ့နေကြတော့ အချင်းချင်းတွေကြား ပိုပြီးသွေးကွဲတာပဲအဖတ် တင်မယ်။ နောက်ပြီး Minority တွေတွက် Majority တွေက ရိုးရာ အခွင့်အရေးလေးတွေ လျှော့ပေးရမှာလား၊ အခွင့်အရေး ချို့တဲ့သူချင်းချင်းအတူတူ တမူးဖိုး ပိုရှူခွင့် ရစေချင်တာလား"
စာရေးဆရာညီတော်တပါး၊ သူလည်း ကိုယ့်လို "ခေါင်းစား" ၍ စာမရေးဖြစ်သူ။ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခွင့်၊ ရေးသားခွင့် ... ခွင့် ... ခွင့် ... တသီကြီး စဉ်းစား နေမိသည်။ သည်နိုင်ငံကြီးမှာရော၊ တန်းတူညီမျှ အားလုံး ခြွင်းချက်မရှိ ရနေကြပြီလား။ တနေ့က ကိစ္စလေးက ရုတ်ချည်းပေါ်လာသည်။ သည် "မီဝေါကီး" မြို့ရဲ့ "ဖရန်ကလင်" ရပ်ကွက်က ရှေးအိမ် ဟောင်းလေးတဆောင်၊ ၁၈၈၅ ခုကတည်းက အဆောက်အအုံလေး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း လုပ်ရန် ကိုယ်တို့သွားဝယ်ကြသည်။ မရ၊ ရောင်းထွက်သွားပြီတဲ့၊ အေးဂျင့်၏စကား၊ တကယ်တော့ မဟုတ်၊ မရောင်းလို၍သာ၊ အဖြူတောမှာ အာရှသားတွေ မဝင်စေလို၍သာတဲ့၊
" အဲဒါပဲ ဘုန်းဘုန်း၊ တပည့်တော်တုန်းကလဲ ကြိုးစားလိုက်ရတာ၊ ဒီကဘွဲ့လည်းရရော အဖြူတွေမလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်မျိုးပဲရတာ" အတူပါလာသောမောင်ရင်လေး၏ နှိုင်းယှဉ်သံ၊ ကိုယ်ကတော့ ခြံဝန်းနှင့် မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းတွေ၊ ကလေးကစားကွင်း အသီးသီးပါသည့် ဝန်းကျင်ကအိမ်တွေကို ငေးကြည့်ကာ သီးခြားနေတတ်သည့် သူတို့ဗီဇကို အသိအမှတ်ပြုရင်း "သူ့ပစ္စည်း သူမရောင်းဘဲ နေပိုင်ခွင့်ရှိတာပဲလေ၊ နောက်ပြီး ကျရာမှာ ပိန်းရိုင်းတွေလိုတောထပြီး ညောင်ပင်လိုမြိုတတ်တဲ့ အာရှမျိုးတွေကလည်း ရှိနေလေတော့ ... အင်း ... " ဟု၊ ဟင်းချကာ ပြန်ခဲ့ကြရ။ ခုတော့ သည်ကလူတွေပဲ လူ့အခွင့်ရေးစကားတွေ အမိမြေဆီ လှမ်းပြောနေပြန်ပြီလေ။ ဒါကလည်း သည်ဇာတိသားစစ်စစ်တွေက တော်တော်ပါ၊ "မယ်ဘော်" တွေကသာ ... ။
လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ဆယ်ခန့်က အဖြစ်လေးတခုကိုလည်း အမှတ်ရသည်။ သည်နိုင်ငံမှာပင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့၊ အမေနှင့် သမီး ဇာတ်လမ်း၊ ဆယ်ကျော်သက်သမီးကို အချိန်မတော် ယောက်ျားလေး မိတ်ဆွေအခန်းကို မသွားရန်တားမြစ်ရာမှ ပြဿနာစခဲ့၊ အမေ့စကား သမီးကလက်မခံ၊ ဒါလူ့အခွင့် အရေးတဲ့၊ သွားမြဲ လာမြဲလုပ်သည်၊ သည်တော့ စိတ်ဆိုးကာ အမေက ပါးကို ရိုက်လိုက်သည်၊ သမီးက တရားစွဲတော့ အမေကတရားခံ၊ သမီးကတရားလို၊ အမှုဆိုင်ရသည်၊ နောက်ဆုံးတော့ တရားစီရင်ရေးဂျူရီအဖွဲ့ဝင်ငါးဦးတွင် နှစ်ဦးကသမီးကိုအနိုင်ပေးကာ သုံးဦးက အမေကိုအနိုင်ပေးခဲ့သည်။ အမေလွတ်ခဲ့သည်၊ ထိုအမှုကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့သောသူတွေထဲမှ အမျိုးသမီးဂျူရီ၏ မေးခွန်းလေးက ခုအချိန်တွင် ကိုယ့်ရင်ကို ရိုက်ခတ်လာတော့သည်။ "လူ့အခွင့်အရေး ... လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ... အဲဒီလူ့အခွင့်အရေးက ကျွန်မတို့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေနဲ့ မိသားစု မေတ္တာနယ်ပယ်ကို ဘယ်လောက်ထိ ထိုးဖောက်နေရာယူခွင့်ပေးမလဲဆိုတာ မေးချင်တယ်" တဲ့။ ကိုယ်လည်း "မစ္စတာဗီဂျေး နံဘီးယား" ကိုမေးခွင့်မသာတော့ အဲဒီပုစ္ဆာလေးကို ဘာသာပဲ အကြိမ်ကြိမ် မေးနေမိ။
နောက် ... မိတ္ထီလာအရေး၊ လူပေါင်းလေးဆယ်ကျော်ပင် သေကျေဆုံးပါးခဲ့ရသတဲ့။ တိုက်တာ အိုးအိမ်တွေက အစားထိုးနိုင်ပေမင့်၊ အသက်တွေ ခန္ဓာတွေကမူ ... ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်၊ အမှိုက်ကစ ပြဿဒ်မီးလောင်ရသည့် သာဓက၊ အမှိုက်ကိုမရှင်းဘဲ ပြဿဒ်ကိုငြှိမ်းနေရုံနှင့် မီးမသေနိုင်၊ မီးကြွင်း မီးကျန်တို့က ထတောက်နိုင်သည်သာ၊ ရောင်းသူဝယ်သူတို့နယ်တွင် "ဝယ်သူအမြဲမှန် ( Customer is always right. )"၊ "ဝယ်သူသာ နတ်ဘုရား ( Customer is god. )" ဆိုသည့် ယဉ်ကျေးမှုသည် အမိမြေကတချို့ဈေးသည်တွေထံမှာ မထွန်းကားသေးဘူးထင်ရဲ့၊ ကြားပင် ကြားဖူးကြရဲ့လား ... ကြားဖူးလျက်နှင့် မကျင့်သုံးချင်လို့လား ... ။
နောက်ပြီး ရခိုင်အရေး၏နောက်ဆက်တွဲသည် ကော့စ်ဘဇား၊ မိတ္ထီလာ၏နောက်ဆက်တွဲသည် ဂျာဗားကျွန်း၊ သည်မျှနှင့် အေးအောင် စွမ်းနိုင်ကြပါ့မလား၊ ဟူး ... ၊ စွမ်းနိုင်ကြပါစေ ... ဆောင်နိုင်ကြပါစေ ...၊ မုန်းစတို၍ ချစ်စ ရှည်နိုင်ကြပါစေ ... ။
"ဦးဇင်းကံ ... တပည့်တော်ကိုယ်စား ရေးလိုက်စမ်းပါ။ စစ်အာဏာရှင်တွေအောက်မှာတုန်း ကတော့ ပါးစပ်တောင်မဟရဲတဲ့သူတွေက ပြောခွင့်ဆိုခွင့်လည်းရရော၊ ပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရအောင် ပါးစပ်တွေ ဖွင့်ပေးတဲ့သူကို ကိုယ့်အလိုမကျတာနဲ့ အရင်ပြန်ဆဲကြတာ၊ ရန်တွေ့ကြတာ ကောင်းသလားလို့ ..."
အမိမြေက စာရေးဆရာနောင်တော်၊ သူ့ပုစ္ဆာက လက်ပံတောင်းတောင်နံရံကို မဖောက်၊ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာသာ ကောင်းသလား ... မကောင်းဘူးလား ... ကောင်းသလား ... မကောင်းဘူးလား ... ၊ အင်း ... လူဆိုတာကလည်း မိမိကိုယ်ကို ဗဟိုပြုစဉ်းစားကြတာဆိုတော့ ... ၊ ဟူး ... ၊
အချို့သူတွေက "ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်နှင့် ဘာမဆိုဖန်ဆင်းပေးနိုင်သည့်တန်ခိုးရှင်" ကို ထပ်တူ မြင်ကြပုံပင်၊ ဟိုအရေးမှာပြောမပေးလို့ ... ဒီအရေးမှာ ဆိုမပေးလို့ ... နှင့် စကားတင်းဆိုကြ၊ မနေ့ကပင် ဓာတ်ပုံပါသည့် တီရှပ်တွေ မီးရှို့ကြသတဲ့၊ အော် ... ။
ပို၍ပို၍ကြေကွဲဖွယ်ကောင်းသည်က အင်ဒိုနီးရှား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှ မြန်မာရေလုပ်သားလေး ရှစ်ယောက်ပင်၊ "ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ခြင်း" ဆိုသည့်အချက်နှင့် အသက်ဆုံးခဲ့ရ သည်လေ၊ ကိုးကွယ်ရာမတူသူတွေကြားမှာ "ဘာသာဝင်" ဆိုတာ ရန်စည်းတခုအဖြစ် ဘယ်လောက်ထိ တည်နေမှာပါလိမ့် ... ၊ ဟူး ... ။
" ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ခွင့်" တဲ့၊ သက်ရှိသက်မဲ့တိုင်း လိုလားအပ်သည့် ဓမ္မ၊ "သမဂ္ဂါနံ တပေါ သုခေါ" တဲ့၊ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘီစီ(၆) ရာစုကပင် ဟောကြားခဲ့၊ "ရှုံးသူမှိုင်၊ နိုင်သူရန်ပွား" တဲ့၊ နောက်ပြီး ကိုယ်တို့ငယ်စဉ်က အမေ မကြာခဏ သွန်သင်လေ့ရှိသည့် " ရန်မလိုမှ ရန်ပြိုသည်၊ ရန်လိုက ရန်ပိုသည်" တဲ့၊ သည်ဓမ္မတွေ လူ့နယ်ပယ်တိုင်းတွင် ပြန့်နှံ့စေချင်ခဲ့၊ ခုတော့ ... အင်အားနည်းခိုက်တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာယှဉ်တွဲနေလိုပြီး အင်အားကြီးလာလျှင် တဘက်ကိုမင်းမူလိုသော "ဉာဉ်ဆိုး" ကိုမဖျောက် နိုင်သည့် "မိုးခိုလာသော ကုလားအုပ်" တွေက နေရာအနှံ့။
လွတ်လပ်ရေးကို ယှဉ်တွဲကာ အသက်ပေး၍ ယူပေးသွားခဲ့ကြသော အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဦးရာဇတ်တို့ကို လှမ်း၍အားနာလိုက်မိသည်။ သည်အရေးတွေအတွက် သုခဘုံ တနေရာက မျက်ရည် တွေတွေများ ကျနေကြလေမလား ...၊ ဟူး ... ။
သို့နှယ် ပုစ္ဆာဟောင်း မပြေမီ ပုစ္ဆာသစ်တို့ ဆင့်ရင်းဆင့်ရင်း ဧပြီ (၁၃) ရက်၊ ကိုယ့်မွေးနေ့သို့ပင် ချဉ်းခဲ့ပါပေါ့လား။ သည့်အတွက်လည်း ဝတ်မပျက် ဆုတောင်းရပေဦးမည်။
"အချင်းချင်း အမျက်အအီ တစိုးတစိ မရှိ၊ ချစ်သော မျက်စေ့ဖြင့် ကြည့်ကြရစေ" ဆိုသည့် ပုဂံ ကျောက်စာက အာမနာကျောင်းအမရဲ့ ဆုတောင်းလေးငှားပြီး ဆုတောင်းလိုက်ရဲ့။ ။
No comments: Labels: Kan Tun Thit, Thoughts
မိုးစဲနေ၊ ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၁၃
No comments: Labels: Moe Sal Nay, Poems
'ဂွမ်းတစ'နဲ့'ရီလီဇင်'တပြား
၁၉၉၇ သင်္ကြန် -- အင်းစိန် (သီးသန့် အကျဉ်းထောင်)
No comments: Labels: Linn Nwe Eain, Poems
ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၃
No comments: Labels: Cartoon Box, Wai Yan (Taung Gyi)
ထွန်းဝေ (ဂျပန်) ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၁၃
နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ခုနစ်ရက်တာ ကြာမြင့်မည့် ဂျပန်ခရီးစဉ်အတွက် ဧပြီလ ၁၃ရက် င်္နနက်ဂျပန်စံတော်ချိန် (၈နာရီ ၁၅ )မိနစ်က ထိုင်းနိုင်ငံမှတဆင့် ဂျပန်နိုင်ငံ နာရီတာလေဆိပ်သို့ အောင်မြင်စွာရာက်ရှိခဲ့ပါသည်။
နာရီတာလေဆိပ်တွင် ဂျပန်ရောက်မြန်မာမိသားစုများ က ရင်ထိုးတံဆိပ်များ၊ ဆိုင်းဘုတ်များ ကိုင်ဆောင်ပြီး လှိုက်လှဲစွာကြိုဆို ခဲ့ပါတယ်။ လာကြိုကြသူများထဲမှ သူကမိန်ကလေးတစ်ဦးက ဒေါ်စုကိုလာကြိုတာ တခြားထွက်ပေါက်ကခေါ်သွားတာက မတရားဘူး ဂျပန်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန လုပ်ပုံတွေက လာကြိုတဲ့မြန်မာများကိုစော်ကားရာရောက်ကြောင်း ကိုထွန်းဝေအားပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ တွင် လာရောက်ကြိုဆိုသူများမှာ ၂၀၀ကျော်ရှိလှပါတယ်။ဂျပန်မှ မြန်မာသံရုံး ဌာနမှ သံအမတ်ကြီး နှင့်တာဝန်ရှိသူများအခြားထွက်ပေါက်မှလာကြိုဆိုကြောင်း သိရပါတယ်။
ဂျပန်ခရီးစဉ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဒေါက်တာတင်မာအောင်၊ ကိုမိုးဇော်ဦးနှင့် ကိုဘန်နီတို့ လိုက်ပါလာခဲ့ကြပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၆ ခုနှစ်အထိ ဂျပန်နိုင်ငံ ကျိုတိုတက္ကသိုလ်တွင် ဧည့်ပညာရှင်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ဖိတ်ကြားခဲ့သဖြင့်သွားရောက် လည်ပတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ခရီးစဉ်အတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့နှင့် တွေ့ဆုံသွားမည်ဖြစ်ကာ ဂျပန်တက္ကသိုလ်သုံးခုတွင် မိန့်ခွန်း ပြောသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဧပြီလ၁၅ ရက်တွင် သူမ ဧည့်ပညာရှင်အဖြစ် တစ်နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ကျိုတိုတက္ကသိုလ်နှင့် Ryukoku တက္ကသိုလ်တို့တွင် မိန့်ခွန်းပြောသွားမည်ဖြစ်ကာ ဧပြီလ၁၇ ရက်တွင် တိုကျိုတက္ကသိုလ်၌ မိန့်ခွန်းပြောသွားမည် ဖြစ်သည်။
ဧပြီလ ၁၆ ရက်တွင် ဂျပန် အထက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့နှင့် တွေ့ဆုံသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဧပြီလ၁၈ ရက်တွင် အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးတို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ဧပြီလ၁၃ ရက်နှင့် ၁၅ ရက်နေ့များတွင် ဂျပန်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် တွေ့ဆုံသွားရန်ရှိပြီး ဧပြီလ ၁၄ ရက်တွင် ကျိုတိုမြို့ရှိ အသေးစား ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတစ်ခုကိုလည်း သွားရောက်လေ့လာမည်ဖြစ်သည်။ ဧပြီလ၁၉ ရက် ညနေပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သတင်း ကိုထွန်းဝေ ဂျပန် နာရီတာလေဆိပ်မှသတင်းပေးပို့ ထားပါတယ်။https://www.facebook.com/tun.wai.10?ref=tn_tnmn(20 photos)
ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၃
ဂန်နန်စတိုင် (Gangnam Style) တေးသီချင်းရုပ်သံဖြင့် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သည့် တောင်ကိုရီးယား ပေါ့ပ်အဆိုတော် ပီအက်စ်ဝိုင် (PSY) က သောကြာနေ့တွင် သီချင်းသစ်တစ်ပုဒ် ဖြန့်လိုက်ပြီး အဆိုပါသီချင်းသစ်ကို မြောက်ကိုရီးယားတို့လည်း နှစ်သက်မည်ဟု မျှော်လင့်နေသည်။
ယခု သီချင်းသစ်၏ အမည်ကို လူကြီးလူကောင်း (Gentleman) ဟု အမည်ပေးထားပြီး သူ၏ ပေါက်သီချင်း ဂန်နန်စတိုင် ကဲ့သို့ ထင်ရှားစေရန် ကြိုးစားထားသည်ဟု ဆိုသည်။
သီချင်းသစ်ထွက်ချိန်သည် တောင်/မြောက် ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံတို့ အစွမ်းကုန် စစ်ရေး မာန်စောင်နေချိန်လည်း ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် စစ်ပြင်ဆင်မှုအကြောင်းအရာက နိုင်ငံတကာသတင်းစာမျက်နှာများတွင် နေရာယူထားသည်။
တောင်/မြောက် ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံသည် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်က ၃ နှစ်ကြာ စစ်ပွဲ ဆင်နွဲခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်မရဘဲ စစ်ရပ်စဲခဲ့ကြကြောင်း၊
ယခုအခါ မြောက်ကိုရီးယားက တောင်ဘက်သို့ ဒုံးကျည်များဖြင့် ပစ်ခတ်မည့် အရိပ်အယောင်းများ ပြနေသည်။
အဆိုတော်ပီအက်စ်ဝိုင်ကမူ သူ့သီချင်းသစ် Gentleman ကို မြောက်ဘက်က နှစ်သက်ကြဖွယ်ရှိကြောင်း၊ သူ၏ တာဝန်မှာ မြောက်ကိုရီးယားတို့အပါအဝင် လူသားအားလုံး ပျော်ရွှင်ကြရေး ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
ပီအက်စ်ဝိုင်၏ မြင်းစီးဟန်ဖြင့် ခုန်ပေါက်ကခုန်မှုများ ပါဝင်သည့် သီချင်းရုပ်သံသည် YouTube ရုပ်သံဝက်ဆိုက်တွင် လူကြည့်အများဆုံးမှတ်တမ်းဝင် သွားသည်အထိ အောင်မြင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
ယမန်နှစ် ဇူလိုင်လက ထွက်ပေါ်လာသော မြင်းစီးဟန်ဂန်နန်စတိုင်ကြောင့် ပီအက်စ်ဝိုင်သည် ကမ္ဘာ့အထင်ကရ ကိုရီးယားလူမျိုးတစ်ဦး ဖြစ်သွားခဲ့လေသည်။
ယခု သီချင်းသစ်ကို နိုင်ငံတကာမှ လူမျိုးစုံတို့အတွက် ဆိုလွယ်တေး ဖြစ်စေရန် ကြိုးပမ်းထားသည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ၎င်းကိုတိုင် ရေးထားသော သီချင်းသစ်တွင် အင်္ဂလိပ် နှင့် ကိုရီးယား နှစ်ဘာသာ သုံးထားကြောင်း၊ သံစဉ်ကိုမူ တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် ပူးတွဲ ရှာဖွေထားကြောင်း သိရသည်။
အကဲခတ် ဝေဖန်သူတချို့ကမူ ပီအက်စ်ဝိုင်သည် သီချင်းတစ်ပုဒ်တည်း ပေါက်ပြီး တဖြည်းဖြည်း ပျောက်သွားမည့်သူဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။
ပီအက်စ်ဝိုင်ကမူ - ကျွန်တော့်ရဲ့သီချင်းတချို့ ကမ္ဘာကျော်သည်ဖြစ်စေ မကျော်သည်ဖြစ်စေ ဒီအလုပ်ကို လုပ်နေတာ ၁၂ နှစ် ရှိပါပြီ။ ကိုရီးယား ကကွက်တွေ၊ ကိုရီးယားသီချင်းတွေကို အရင်ကထက် ပိုပြီး ကျွန်တော်က ပြည်ပပို့ပေးမှာပါ ဟု ပြောဆိုလိုက်လေသည်။
No comments: Labels: Music VDO
ရှင်ကွဲ သေကွဲအရပ်မှာ ... ပိတောက်တွေ ပွင့်တဲ့အခါ
ဒီလို အခါကြီး ရက်ကြီးကျမှ သေရသတဲ့လား ...။
ကျနော့်မှာ မျက်ရည်နဲ့သာ ပက်ခွင့်ရခဲ့တယ် ...။ ။
(ဒီနေ့မှာ သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ အမေ့ရဲ့ ကျနော်လိုက်မပို့နိုင်သော ဈာပနအခမ်းအနား .... သို့)